Sajhasawal.com.np |मधेसमा ओली ‘मिसन’सफल - पाँचौंबाट दोस्रो दलतर्फ उक्लिँदै एमाले
काठमाडौंमा हैजाका बिरामी भेटिए, के के हुन् लक्षणहरु ?
दुबईबाट नेपाल आएका युवकमा मंकीपक्स भाइरस संक्रमणको आशंका
सानै उमेरमा साथीसँग खेल्ने बालबालिकामा मानसिक स्वास्थ्य जोखिम न्यूनः अध्ययन
विश्वविद्यालयबाट निस्काशन गरेको झोंकमा दुई प्राध्यापकहरुको हत्या
वैदेशिक रोजगार बिभागद्वारा अल आसमाक्स म्यानपावरमा छापा, डिमाण्डनै नआई धमाधम अन्तर्वार्ता !
पोर्चुगल पठाइदिन्छु भनी साढे ३३ लाख ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ
साउदी अरबमा कामदारलाई तीन महिनासम्म दिउँसो बाहिर घाममा काम लगाउन नपाइने
जेठ ७, काठमाडौं | नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ८ चैतमा मधेसका विभिन्‍न दल त्याग गरेका नेताहरूलाई भित्र्याउँदै भनेका थिए, ‘एमाले नै जय मधेसवाला पार्टी हो ।’
मधेस प्रदेशको विकास र समृद्धिको वाहक एमाले हुन्छ भन्‍ने अर्थमा ओलीले यसो भनेका हुन् । ओलीको यो अभिव्यक्ति मधेसका मतदातालाई एमालेतर्फ प्रभावित पार्न लक्षित थियो ।
ठीक एक महिनापछि ९ वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै एमाले मधेसमा शक्तिशाली दल भएर उदाउने र त्यसले राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल हुने बताएका थिए ।
ओलीको उक्त अभिव्यक्तिलाई स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामले सत्य भएको पुष्टि गरिदिएकाे छ । किनभने केही स्थानीय तहको मतगणना बाँकी छँदै मधेस प्रदेशमा एमालेले दोस्रो दल बन्‍ने छनक देखाएको छ ।
यसअघि २०७४ सालको निर्वाचनले एमाले १८ स्थानीय तहमा जित निकाल्दै पाँचौं दलको हैसियतमा खुम्चिएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गरेको शनिबार बिहान ११ बजेसम्मको विवरणलाई आधार मान्दा एमालेले अघिल्लो पटकभन्दा बढी दुई वटा स्थानीय तह जितेर २० वटा पुर्‍याएको छ । नौं वटा स्थानीय तहमा भने अग्रता छ । अग्रता भएकामा पनि जित भए मधेस प्रदेशमा एमालेको २९ स्थानीय तहमा जित हुनेछ ।
जनता समाजवादी पार्टीको पनि जित भएको स्थानीय तह २० वटा नै हो । तर, अग्रता सात वटा स्थानीय तहमा मात्र छ ।
सोही कारण एमाले दोस्रो दल हुने सम्भावना बढेको हो । जबकि, एमाले विभाजित अवस्थामा निर्वाचनमा गएको हो । प्रदेश संसद्‍मा एमाले फुटेर बनेको दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीभन्दा सानो छ ।
‘मधेसमा एमालेलाई शक्तिशाली दल हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन । जुन कुरा यो निर्वाचनले पुष्टि गरिदियो’, उनले न्युज कारखानासँग भने, ‘मधेसी नागरिकको विश्‍वास एमालेमाथि छ । किनभने एमाले मधेसहित सिङ्‍गाे देशको विकास गर्ने पार्टी हो ।’
उनले मधेसलाई एमालेमय बनाउन चाहेको बताएका छन् ।